सेड्रिना र अनुभबसंग फ्लिम खेल्दै रहेकी ५ बर्षकी बालिका एबिलिना खड्का किन भईन टिकटकमा रातारात भाईरल? – Khabar Silo
पछिल्लो समय बाल कलाकारहरुले पनि नेपाली समाजमा निकै गहिरो छाप छाडेका छन भाइरल भएकै कारण।उनीहरु भाइरल हुदै गर्दा मिडियाको पनि प्रमुख भूमिका देखिन्छ त्यस्तै भाइरल हुनेमा पछिल्लो समय एबिलिना खड्का पनि पर्दछिन।उनि यो समय टिकटकमा निकै भाइरल छिन।
टिकटकमा भाइरल भएकी सानी बालिका एबिलिना खड्का अब चलचित्र खेल्ने तयारीमा समेत रहेको खुलेको छ।उनि अब चलचित्रमा आउने देखिएको छ कारण उनि निकै चर्चामा छिन उनले खेलेका अधिकांश गीतहरु चर्चित पनि छन।उनि म्युजिक भिडियो देखि टिकटक सम्म भाइरल हुदै गर्दा सेड्रीना र अनुभब रेग्मीलाइ समेत भेटेर चलचित्र खेल्ने बताएकी छिन।हेरौ भिडियो नै:
मानिसहरुले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागी धेरै सपनाहरु देखेका हुन्छन् । उनीहरु जीवनमा केहि कुरा हाशिल पनि गर्न चाहन्छन तर ति कुराहरु पाउन अथवा सफलता प्राप्त गर्न त्यति सजिलो पनि हुदैन ।
त्यसको लागी धेरै परिस्थितिहरुको सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जीवनमा अघि बढ्ने क्रममा साना ठुला समस्याहरुको सामना गर्दै जादा दिमागमा पनि अनेक कुराहरु खेल्ने गर्छन ।
जस्तै : मा यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिन होला, अब यसपछि फेरी कस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्ने होला, यस्तै यस्तै कुराहरु मनमा खेलिरहन्छन । जब मानिसहरुको मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्दछ तब ऊ डिप्रेसनमा जान सक्दछ ।
यसले गर्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ख्यालमा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ । यदि मनमा धरै कुराहरु खेलिरहेका छन् भने आफ्नो मन मिल्दो साथीभाईहरु सग त्यो कुरा शेयर गर्ने गर्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईको मन हल्का हुन्छ ।
आजकल मानिसहरु धेरै तनावमा रहने गर्दछन । आफ्नो घर परिवारलाई लिएर तनावमा हुन्छन भने कतिपय आफ्नो करियरलाई लिएर तनावमा रहेका हुन्छन । त्यसैले आज हामी यस्ता कुराहरुलाई मध्य नजर गर्दै यस्ता समस्याहरुबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने बारे चर्चा गर्न गईरहेका छौ ।
तनावमा रहिरहनु भनेको एकदमै गम्भीर समस्या हो त्यसैले हामीले यसलाई सामान्य रुपमा लिनी हुदैन । किनकि तनावमा रहेका कारण मानिसहरुबाट अप्रिय घटनाहरु पनि घट्ने गर्दछ ।
दिमागलाई सन्तुलनमा कसरी राख्ने ?
१. लेख्ने बानीको विकास गर्नु
यदि तपाइको दिमागमा एकै चोटी धेरै कुराहरु आइरहेका छन् भने ति कुराहरुलाई आफ्नो निजि डायरीमा टिपोट गर्नुहोस् । ति कुराहरुलाई दिमागमै राखिरहनु भयो भने तपाइको दिमागलाई निकै प्रेसर पर्छ त्यसैले दिमागमा जे जति कुराहरु आए पनि त्यसलाई टिपोट गरिहाल्नुहोस । यसरी दिमागमा आएको कुराहरुलाइ टिपोट गर्ने बानीले दिमागी सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्दछ ।
यदि तपाईको लेख्ने बानी छैन भने एकपटक लेखेर हेर्नुहोस् तपाईको मन हल्का हुनेछ । र तपाई विकल्प र बिचारको पनि राम्रो सग बिश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ । नकारात्मक्क होस् वा सकारात्मक कुरा त्यसलाई टिपोट गरिहाल्नु र ति मध्ये कुन कुराले तपाईलाई फाईदा पुर्याउछ र कुन कुराले बेफाइदा त्यसको बारेमा बिचार गर्नुहोस् ।
2. आफ्नो लागी ठाउ बनाउनुहोस्
मानिसहरुको कस्तो बानी हुन्छ भने उनीहरु आफ्नो बारेमा भन्दा बढी अरुको बारेमा सोचेर तनावमा आउने गर्दछन । त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा आफुलाई महत्व दिनुहोस । आफुले गर्ने कामहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्नुहोस् । जतिबेला पनि काम मात्र भनेर नबस्नुहोस ।
मनोरंजनका लागी पनि समय निकाल्नुहोस । हप्तामा एक पल्ट साथीभाईहरु संग वा आफ्नो परिवार संग कतै रमाइलो ठाउमा घुम्न जाने गर्नुहोस् । बिभिन्न चाडपर्वहरुमा मन खोलेर रमाउने गर्नुहोस् । हरेक कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा एउटा सकारात्मक उर्जा आउछ र नकारात्मक बिचारहरुले तपाईमा ठाउ पनि पाउदैनन ।
३. जीवनको लागी प्राथमिकता छुट्याउनुहोस्
सबैभन्दा सुरुमा तपाइले गर्ने काम र तपाईको जीवनको महत्वपूर्ण कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् । किनकि आफ्नो जीवन आफैले बनाउने हो त्यसैले प्राथमिकताहरु छुट्याउन एकदमै जरुरी हुन्छ । तपाईको लागी महत्वपूर्ण के छ त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्नुहोस् ।
अरुले आफ्नो बारेमा के भन्छन भनेर नसोच्नुहोस । यसले गर्दा तपाइँसंग अनावश्यक कुराहरुको लागी समय पनि हुदैन र तपाईको इज्जत पनि बढ्दै जान्छ । यसरी आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्दै जानुभयो भने करियरमा सफल पनि बन्नुहुनेछ । त्यसपछि तपाईको दिमागबाट अनावश्यक कुराहरु पनि घट्दै जान्छ र तपाईको समाजमा पनि एउटा राम्रो छाप बस्ने छ ।
४. सम्बन्ध बिस्तार गर्नुहोस्
जीवनमा सधै सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरुको मात्र संगत गर्नुहोस् । उच्च बिचार भएका व्यक्तिहरु संग सम्बन्ध बिस्तार गर्दै जानुभयो भने तपाईको काम गर्ने क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्नेछ । आफ्नो काम र व्यक्तिगत जीवनलाई एकै ठाउमा मिलाएर नबस्नुहोस ।
व्यक्तिगत जीवनलाई बेग्लै र खुसि भएर बाच्नुहोस । आफ्नो पेशागत मर्यादा र जीवनलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो सिमितता बनाउदै जानुहोस । यसले गर्दा तपाइँ बिना कुनै अलमल अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईको दिमागमा अनावश्यक कुराहरु पनि आउदैनन ।
५. काम गर्ने बानीको बिकास गर्नुहोस्
जति धेरै कम गर्यो त्यति बढी दिमागबाट नकारात्मक कुराहरु पनि हट्दै जान्छ । जो मान्छे केहि काम नगरी बस्छ उसको दिमागमा अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्दछ र उसको दिमागी सन्तुलन पनि बिग्रन सक्दछ । त्यसैले काम नगरी बसेर आफ्नो दिमागमा नराम्रो कुराहरुलाई डेरा बसौं नदिनुहोस् । आफुले आफुलाई ब्यस्त राख्नुहोस् ।
एकैपटकमा धेरै काम गर्न नखोज्नुहोस । पलाई पालो काम गर्ने गर्नुहोस् । एकैपटक धेरै काम गर्ने भनेर सोच्न थाल्नु भयो भने तनाव मात्र बढ्छ त्यसैले हरेक काम पालै पालो गर्ने गर्नुहोस् । धेरै काम गर्दा तपाईको समय ब्यबस्थापन पनि मिल्दैन र तपाइँको ध्यान नै अलमल पर्छ । त्यसैले आफुलाई कुन काम गर्दा खुसि मिल्छ त्यो काम गर्नुहोस् ।
६. तालिका बनाएर काम गर्नुहोस्
आफ्नो दिन अस्तव्यस्त भयो भने दिमागमा नकारात्मक कुराहरु आउन थाल्दाछ र तनाव पनि बढ्छ । त्यसैले समय ब्यबस्थापन गरेर आफ्नो काम गर्ने गर्नुहोस् । समय ब्यबस्थापन गर्दा सबै कामहरु बिना कुनै झन्झट गर्न सकिन्छ । र, आफ्नो दैनिकीलाई ब्यबस्थित बनाउन सकिन्छ । समयलाई महत्व दिनुहोस र अघि बढ्नुहोस । यदि तपाइँ करियरमा पनि सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने समयलाई पनि महत्व दिनु एकदम जरुरी हुन्छ ।
७. व्यक्तित्व बिकासमा लगानी गर्नुहोस्
आफु बस्ने ठाउ र आफुले काम गर्ने ठाउ सफा र सुन्दर राख्नुहोस् । बिभिन्न सभा तथा सेमिनारहरुमा सहभागी हुने गर्नुहोस् । यसले तपाइ नयाँ कुराहरु सिक्न पाउने हुनेछ । नयाँ साथीहरु बनाउन पाउने मौका पनि पाउनेहुनेछ । नयाँ कुरा सिक्ने तालिमहरु खुलेको ठाउमा सहभागी हुन जानुहोस । नबुझेको कुरा सोध्ने गर्नुहोस् । आफुलाई आर भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नयाँ – नयाँ कुराहरुसंग अपडेट रहनुहोस् । तपाईमा जति धेरै कुराहरुको जानकारी हुन्छ त्यति बढी तपाईमा राम्रा कुराहरु आउन थाल्नेछन । पुस्तकहरु खोजि खोजि पढ्ने गर्नुहोस् । यस्ता कामहरु गरिरहदा तपाइँ संग अनावश्यक कुराहरु सोचेर बस्ने फुर्सद पनि हुदैन र तपाइँ एक सकारात्मक बिचार लिएर अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ ।
८. शारीरिक अभ्यास र योगा गर्नुहोस्
बिहान अरु उठ्नु भन्दा अगाडिनै उठेर एक घण्टा भए पनि हिड्ने गर्नुहोस् । बिहानको चिसो हावामा हिड्दा दिमाग पनि फ्रेश रहन्छ र शारीरिक तन्दुरुस्ती सगै दिमागमा बेग्लै किसिमको उर्जा पनि थपिदै जान्छ । हरियाली र शान्त भएको ठाउमा गएर केहि समय भए पनि बस्ने गर्नुहोस् । बिहानै उठेर योगा गर्ने गर्नु किनकि यसले शरीरमा भएको रोगहरुलाई पनि ठिक गर्दछ । शारीरिक अभ्यास गर्दा शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति पनि बढ्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका कामहरु यदि तपाइले आज बाट आफ्नो जीवनमा लागु गर्नुभयो भने नकारात्मक सोच र आलस्यता बाट तपाइँ टाढा रहनुहुनेछ । र, तपाईको दिमागबाट तनाव पनि कम हुदै जान्छ । संसारमा जति पनि समस्याहरु छन् तिनीहरुको समाधान् पनि छ तर कतिपय मानिसहरु त्यसको खोजिनै गर्दैनन् र जिन्दगीभर पछुताएर बस्ने गर्छन ।
त्यसैले के समस्या छ त्यसबारे खोजी गर्नुहोस् र त्यसको समाधान के छ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्न थालिहाल्नुहोस । यसो गर्नाले तपाइँ एक स्वस्थ र सुन्दर जीवन बाच्न सक्नुहुनेछ । आफु र आफ्नो परिवारलाई तनाव मुक्त राख्नुहोस् । सधै दिमागमा सकारात्मक ओछ राख्नुहोस् । जतिसक्दो नकारात्मक कुराहरुबाट टाढा नै बस्नुहोस । किनकि सकारात्मक सोचले नै तपाईलाई उज्यालो पाटोतर्फ लैजान्छ ।
हलिउड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा गरेको डेब्यु सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ।लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि टाढा रहँदै आएकी जेनिफरले बुधबार इन्स्टाग्राममा पहिलो पोस्ट गरिन्। उनको पहिलो पोस्ट नै भाइरल बन्यो। उनको पहिलो पोस्टले गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको। सबैभन्दा कम समयमा १० लाख फ्लोअर्स बनाउन सफल जेनिफरको एकाउन्ट केही समयका […]
Posted on March 3, 2021 Author khabar silo
बरिष्ठ कलाकार लक्ष्मी गिरीले श्वेता खड्का बिवादको बारेमा बोलेकी छिन् । उनले श्रकृष्ण सुटिँगको सेटमै बिरामी हुन्थे भन्दै श्वेतालाई पछिल्लो समय लागेकोआरोपका बारेमा स्पष्ट बिचार राखिन् । साथै उनले शिशिर भण्डारीसँगको कुराकानीमा अहिलेका चर्चित नायकहरु पल शाह, प्रदिप खड्का र अनमोल केसी को राम्रो लाग्छ भनेर बताएकी छिन् लक्ष्मी गिरी, उहाँ नेपाली, भोजपुरी, मैथली र […]
चर्चामा वसन्त थापा: प्रेम दिवसमा ‘सयको गुन’